Ashley Young oo kalsooni weyn ka muujiyay in xulka qaranka England uu ku guuleysan doono koobka aduunka 2018 – Gool FM
(Russia) 09 Luulyo 2018. Laacibka kooxda Manchester United Ashley Young ayaa sheegay inuu aaminsan yahay xili kasta awooda uu xulkiisa qaranka England u leeyahay inuu ku guuleysan karo koobka aduunka 2018.
Xili uu hogaaminayo tababare Gareth Southgate ayaa la filayaa in xulka qaranka England uu ku guuleysan karo koobka aduunka 2018 haatan ka socda dalka Russia.
33 jirkan ayaa kahor kulanka ay kulla ciyaari doonaan xulka qaranka Croatia wareega afar dhamaadka koobka aduunka 2018 ee haatan ka socda dalka Russia wuxuu la hadlay saxaafada.
“Waxaan helnay fursad weyn, waxaanu ku jirnaa boos fiican oo aan ku sii wadi karno shaqada”.
“Waxaan qori doonaa qiso gaar inoo ah, ma jirto cid ku sugan qolka labiska ee aaminsaneed inaan gaari doono heerka aan haatan taaganahay”.
“Qof kasta wuxuu aaminsan yahay kalsoonidan, waxaan heysanaa ruux iyo kalsooni aan ku gaari garno meesha ugu macquusan, waxaan rajeeneynaa inaan sii wadno shaqadan waxaana rajeenayaa inaan ku guuleysano koobka aduunka”.